ITMA ASIA + Vaovao fampiratiana indostrialy CITME
"Fampiratiana ny milina iraisam-pirenena sinoa ary fampirantiana ITMA Asia" (ITMA ASIA + CITME) dia natsangana tamin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny "China International Textile Machinary Exhibition" sy "ITMA ASIA". Hetsika iraisana ataon'ny masinina milina lehibe indrindra ...
Fampidirana vokatra misongadina
Pin Spacer Ny mekanisma sy ny fampiharana ny lozabe ao amin'ny bara fanerena eo amin'ny faritra anoloana ary ny Pin Spacer an'ny tsindry faneriterena no resahina. Amin'ny alàlan'ny fitsapana karazan-karazany roa an'ny J36 ~ S (?) C40 ~ S eo amin'ny frame mihodina, aseho ny valiny ...
Fantaro vetivety izahay
Orinasa Wuxi KS Import sy Export Limited dia misahana manokana amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny fivarotana fitaovana lamba. Izahay koa dia manana traikefa mihoatra ny 7 taona amin'ity rakitra ity sy nanondrana ny entana any amin'ny faritra sy firenena samihafa. Efa ela izahay no niara-niasa tamin'ny landihazo, volon'ondry, hemp, spu ...